Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiyihii xilka iska casilay Jawaari oo shir jaraa’id qabtay | Baydhabo Online
Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiyihii xilka iska casilay Jawaari oo shir jaraa’id qabtay
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Guddoomiyihii Baarlamaanka ee xilka iska casilay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa goor dhow si wadajir ah shir jaraa’id ugu qabtay madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Guddoomiye Jawaari oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay inuu xilka ka degi doono maalinta berri, si uu amaanada dib ugu celiyo baarlamaanka, isagoo xusay in sababta uu hada u soo muuqday ay tahay inuu si rasmi ah u caddeeyo is casilaadiisa.
Waxaa uu sheegay in wixii kaloo dheeraad ah uu maalinta berri ka hor-jeedin doono Baarlamaanka, isagoo u mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed, kana raalli geliyay wixii jiray ee jahwareerka ahaa.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi farmaajo oo isna hadlay ayaa uga mahad celiyay go’aanka uu qaatay Jawaari, waxaana uu sheegay inuu yahay nin oday ah oo muddo 50 sano u soo shaqeeyay dalka.
“Go’aanka uu qaatay Guddoomiye Jawaari waa mid taariikhi ah, wax shuruud ahna kuma xirna”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo hadalkiisa uu ahaa mid koobnaa.
Waxaa uu sheegay in go’aanka uu qaatay yahay mid taariikhi ah, isla markaana uu ku dhiira gelinayay inuu sii wado dadaalada dowladnimada, qabyo tirka dastuurka, maadaama uu yahay khabiir dhanka sharciga ah, isla markaana ay ka filayaan talo bixinta iyo talo soo jeedintiisa.